Fifandraisana | Ny valisoa valisoa, ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Ny fifandraisana mahomby dia miankina amin'ny fananganana fahatakarana ny fitiavana sy ny fomba fifandraisan'ny fitiavana amin'ny firaisana.
Aiza no tafiditra ao anatin'ny fifangaroana ny pôrnôgrafia? Fa maninona no atahorana hampidi-doza toy izany?
"Inona no atao hoe fitia?" dia iray amin'ireo voambolana be mpitady indrindra ao amin'ny motera fikarohana. ” Ny famaranana ny Grant Study, fanadihadiana nandritra ny 75 taona tao amin'ny Oniversiten'i Harvard dia ny "fifaliana dia fitiavana". Ny fandinihana Grant dia nampiseho fa ny fifandraisana mafana no fototra tsara indrindra amin'ny fahasalamana, harena ary fiainana lava. Mifanohitra amin'izany, ny fiankinan-doha, ny famoizam-po sy ny neurosezy no sakana lehibe indrindra amin'ity fanjakana irina indrindra ity. Ny fahafantarana ny loza mety hitranga manodidina ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia zava-dehibe raha te hiala amin'ny fidorohana amin'ny fiankinan-doha isika ary hahita fifandraisana fitiavana mahafa-po.
• Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet